ပြည်သူ့အကယ်ဒမီ ဂုဏ်ပြုဆုပေးပွဲက ပျော်ရွှင်စရာ အမှတ်တရလေးတွေကြောင့် ကြည်နူးမဆုံး ဖြစ်နေရတဲ့ ခရစ္စတီးနားခီ - Myanmarload
ပြည်သူ့အကယ်ဒမီ ဂုဏ်ပြုဆုပေးပွဲက ပျော်ရွှင်စရာ အမှတ်တရလေးတွေကြောင့် ကြည်နူးမဆုံး ဖြစ်နေရတဲ့ ခရစ္စတီးနားခီ
လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ် က 23:57 May 16, 2019
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ခီမောင်နှံလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ပီပြင်ပြီး သဘာဝကျတဲ့ သရုပ်ောင်ပိုင်နိုင်မှုတွေနဲ့ ယောကျၤားပီပြင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဇာဏ်ခီနဲ့ သဘာဝကျကျ ပီပြင်လွန်းတဲ့ အမိုက်စားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးပုံဖော်တတ်တဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့ ဇနီးမောင်နှံကို ပြေးမြင်မှာပါနော်..။
အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားကြတဲ့ သူတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းသားချောလေးနဲ့အတူ သာယာပျော်ရွှင်ပြီးကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေကြသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လက ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈)ခုနှစ် အကယ်ဒမီထူးခွန်ဆုပေးပွဲမှာ အကယ်ဒမီဆုတွေနဲ့ လွဲခဲ့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပေးအပ်ထားတဲ့ ပြည်သူအကယ်ဒမီဆုတွေကိုတော့ ရရှိခဲ့ကြပါတယ်..။
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေနဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပြည်သူ့အကယ်ဒမီ ဂုဏ်ပြုဆုပေးပွဲကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ မေ(၁၂)ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ခီမောင်နှံနဲ့အတူ မီမောင်နှံလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့ မင်းသမီးချောပိုင်ဖြိုးသုတို့ကလည်း ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ခရစ္စတီးနားခီကလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူ့အကယ်ဒမီဂုဏ်ပြုဆုပေးပွဲရဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကိုလည်း ကြည်နူးမဆုံးြဏ်နေပါတယ်နော်..။
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုလေးတွေနဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေထားပြီး "ပျော်ရွှင်ရသောနေ့လေးတနေ့!!
Love you all!!.." ဆိုပြီး ခရစ္စတီးနားခီက အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့အတူ ရေးသားပြောပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
Photo - ခရစ္စတီးနားခီ